Habka iibsashada Suuqa Macaamiisha | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Is Dhex Galka Bulshooyinka Caalamka |Tukesomalism.com
Sahal Issaakh, May 19, 2016
Kaalinta Bulshada Ay Kaga Jiraan Gabdhaha Soomaaliyeed!
Muslimo Cabdullaahi, September 28, 2018
Hoggaamiyaha Wanaagsan – Siddee hoggaanka fiicani u egyahay?
Tuke Somalism, April 7, 2019
‘Waxaan u Noolahay Inaan Markale Gabadheyda Arko’
BBC Somali, July 12, 2018
Daawo: Maxaad ka Taqanaa 5-ta Wadan Ee Dunida Ugu Faqrisan?|Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 2, 2016
Sideen U Abuuri Karnaa Dhalinyaro Wadaniyiin Ah, Daacadna Ah, Islamarkaana Aaminsan Qaranimadii Soomaaliyeed |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, September 6, 2016
Sidee Looga Takhalusi Karaa Niyad Jabka ? Qeybta 3aad ITukesomalism.com
Maxamed Juxa, March 18, 2016
Talow Kaalaya Maanta Iga Celiya Malakulmowt!
Suldaan Nayruus, December 6, 2018
Jama Hursow — September 23, 2019
Habka iibsashada ee Suuqa Macaamiisha
Ma isweydiisay qaababka ay wax u iibsadaan macaamiisha? Hab-dhaqanka iyo fahanka go’aamanka ay gaarayaan marka ay wax iibsanayaan?
Waa su’aal da’weyn oo u baahan in loogu jawaabo si cilmiyeysan. Macaamiisha inta aysan wax iibsan, waxa jirta inay soo maraan qaabab kala duwan. Macaamiisha uma sinno habka wax iibsiga iyo go’aan gaarista iibsashada.
Waxaan halkaan kusoo gudbinayaa habka ama geedi-socodka uu maro ruuxa kahor inta uusan wax iibsan.
Talaabada 1-aad: Ogaanshaha ama cadeynta baahida. Ruuxa marka ugu horeysa waa innuu ogaadaa waxa uu rabo innuu iibsado, sida kale haddii aan u dhigo baahidaada waa inaad xaqiijisaa. Marka aad fahamto ama ogaato waxaad u baahantahay waxay kuu fureysaa irid kale.
Tusaalle ma gaari ayaad u baahan tahay mise baaskiil?
Talaabada 2-aad: Nidaamka raadinta. Marka aad ogaatay baahidaada, wadada xigta ayaa ah inaad raadisid suuqa laga helo iyo shirkadaha iibiya waxa aad dooneeysid. Tusaale gaari ayaa rabtaa inaad iibsato, waxad baaritaan ku sameynee suuqa, taas oo kuu sahleysa inaad ogaato gaariyaasha kala duwan ee lagu iibiyo suuqa-furan. Halkaan waxa laga yaaba inaad soo ogaatay shirkadaha kala duwan ee iibiya gaadiidka, Sida MBW, Audi, Toyota, Mazda, Ford iwm.
Talaabada 3-aad: Qiimeeynta fursadaha. Baaritaan dheer kadib waxad ogaatay in suuqa laga helo gaadiid farabadan iyo nuucyo kala duwan. Halkaan waxaad falaqeyni tayyada gaariga, baaxada gaariga, qiimaha, naqshada, shidaalka iyo waliba raaxada gaariga. Intaa kadib waxa kuu furan inaad shirkada aad la dhacsantahay inaad wajahdo.
Talaabada 4-aad: Go-aanka iibka. Halkaan waxaad ku dooranee gaariga aad rabtid inaad iibsato. Waa soo dhamaaday baaritaan, fursadaha jira iyo dhamaan warbixinada suuqa waad kasoo dhamaatay. Halkaan 3 wado ayaa kuu furan: Inaad iibsato, inaad dib udhigato ama inaad iska daysid gabi ahaanba.
Talaabada ugu dambeeysa: Hab-dhaqanka iibka gadashada kadib. Macaamiisha waxa lagu yaqaanaa inay ka warbixiyaan shirkada marka ay wax ka iibsadaan kadib. Taasi waxay noqon kartaa inay si wanaagsan oo togan inay uga warbixiyaan ama inay si xun oo shirkada magac iyo sumcad xumo usoo jiideysa inay uga warbixiyaan. Waxay noqon kartaa habka adeega, talada uu siiyay iibiyaha macaamiisha, balanqaadyada iwm. Maxaa laga rabaa iibiyaha inuu sameeyo?
Dabcan waxa laga rabaa sida ugu habboon innuu qanciyo macaamiisha si mar labaad usoo laabtan, taas waxay keene in macaamiishaas ka helaan shirkadaan islamarkaana kula taliyaan saaxibada kale.
Mu’hiim ma ahan ruuxa wax iibsanaya in uu maro dhamaan nidaamkaan hor ku xusan, waxay ku xirantahay ruuxwalba habka uu wax u iibsado iyo habdhaqanka.
Tags: Habka iibsashada ee Suuqa Macaamiisha
Next post Isticmaalka Saxsan Ee Saddexdhibcoodka ( . . . )
Previous post Muhiimadda Wax Akhrisku Ku Leeyahay Islaamka